Android Pie သည် Sony Xperia XZ Premium, XZ1 နှင့် XZ1 Compact တွင်လာသည် Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | NOTICIAS, Sony က, လဲ tutorial
ဆိုနီမိုဘိုင်းလုပ်ငန်းသည်မှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်သော်လည်း အောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာ, ကုမ္ပဏီယနေ့စတင်စတင်ခဲ့သည် အန်းဒရွိုက်9Pie အတွက် က Xperia XZ ပရီမီယံ, က Xperia XZ1 y က Xperia XZ1 Compact။ စာရေးချိန်မှာ အဆိုပါ update ကိုသာဒေသများနှင့်မော်ဒယ်မူကွဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကန့်သတ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်သူကလာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌တိုးချဲ့လိမ့်မည်။
အဆိုပါ update ကိုအတူနှင့်အတူလှုံ့ဆော်ပေး အရေအတွက်က 47.2.A.0.306 တည်ဆောက် နှင့်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၈ တွင် Android လုံခြုံရေး patch ကိုအသုံးပြုထားသည်။
Android Pie သည်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလကအဆိုပါဆိပ်ကမ်းများအတွက်လာမည်, ဒါကြောင့်ဒီတည်ငြိမ်မှုပြaနာဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်မဟုတ်နိုင်အောင်နောက်ဆုံး retouching ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်, ဒီလွှတ်တင်အနည်းငယ်နောက်ကျသည်။ ထို့ကြောင့် Sony သည်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေး patch များဖြင့် update ကိုတွန်းအားမပြုခဲ့ဟုကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိကြသည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီ update မှာ Android Pie ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဟန်အမူအရာလမ်းညွှန်မရှိပါ။ သို့သော်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်တွင် Sony ၏ကင်မရာ interface အသစ်၊ FullHD နှေးကွေးသောဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းအား 960 fps နှင့် HDR ဗီဒီယိုပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း (X-Reality with HDR converter) ယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ selfie ကင်မရာဖန်သားပြင် flash ကိုလည်းထောက်ခံမယ်လို့ကောလာဟလတွေထွက်ခဲ့ပေမယ့် update ကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖို့စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ (ရှာတွေ့သည်: Sony ဖုန်းများအနေဖြင့် Android 9.0 Pie ရရှိမည့်ရက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်).
ဒီမော်ဒယ်များအတွက် Android Pie ကို Install လုပ်နည်း
ရှင်းနေသည်မှာသင့်တွင်ဤအဆင့်မြှင့်တင်မှုမရှိသေးပါကသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်စိတ်ရှည်သည်းခံပြီးသင်၏မော်ဒယ်ကိုရောက်ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ သတိထားရရန်, သင်သည်ရိုးရှင်းစွာကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်ရှိသည် configuration ကို o setting များကို; အထူးသဖြင့်မွမ်းမံမှုများအပိုင်း၊ အကယ်၍ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ရရှိနိုင်မလားစစ်ဆေးရန်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်နှင့်ပြီးဆုံးဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်.
ဒေတာအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာပြတ်တောက်မှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကိရိယာကိုအားအပြည့်သွင်းပြီး Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Sony Xperia XZ Premium, XZ9 နှင့် XZ1 Compact တွင် Android 1 Pie ထည့်သွင်းနည်း။ ဗားရှင်းသစ်သည်ဤမော်ဒယ်များအတွက်ဖြစ်သည်။